FAQS - समाचार - शेन्डोंग Aiguo फोर्जिंग कं, लिमिटेड।
घर > समाचार > FAQS
Q:म सामानहरू देख्न सक्दिन वा सामानहरू छुदिन, म कसरी जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्छु?
A:हामी फ्ल्यांजको २०-वर्ष आपूर्तिकर्ता हौं। हाम्रो गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली आईएसओ 9001 को आवश्यकता अनुरूप DNV द्वारा प्रमाणित। हामी तपाईंको विश्वासको लागि निश्चित रूपमा लायक छौं। हामी पारस्परिक विश्वास वृद्धि गर्न परीक्षण आदेश स्वीकार्न सक्छौं।
Q:कसरी एजी निरीक्षण जाँदै छ?
A:कारखाना भित्र घर सेल्फ चेक वा थर्ड पार्टी निरीक्षण।
Q:तपाईं कसरी गुणवत्ता नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
A:हामी उत्पादन अघि नमूना पुष्टि व्यवस्था गर्नेछौं। उत्पादनको बखत, हामीसँग पेशेवर QC कर्मचारीहरू छन् गुणवत्ता र निर्माणको पुष्टि को नमूना अनुसार। हामी प्याकेजिंग को शुद्धता ग्यारेन्टी र हामी शिपिंग नमूना पठाउन हुनेछ।
Q:के तपाईको मूल्य अन्य कम्पनीहरु भन्दा उच्च छ?
A:भूतपूर्व कारखाना मूल्य, उही गुण, हामी अन्य आपूर्तिकर्ताहरू भन्दा धेरै सस्तो छौं। हामी हाम्रो गुणवत्ता र लागत नियन्त्रण गर्न सक्छौं। हाम्रो मूल्यहरु धेरै प्रतिस्पर्धी छन्। र हामी सबै ग्राहकहरु संग दीर्घकालीन र मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्न समर्पण गर्दछौं।
Q:के तपाईं यस उत्पादनको मूल्य उद्धृत गर्न सक्नुहुन्छ?
A:तपाईंको बहुमूल्य समय बचत गर्नका लागि कृपया आइटम, साइज, मात्रा सहित विस्तृत अन्वेषण सूचीको साथ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाइँले हामीलाई जति धेरै जानकारी दिनुहुन्छ, त्यत्ति नै सहनशील प्रस्ताव तपाईं पाउनुहुनेछ। स्पष्ट रूपमा यी कारकहरूले मूल्यलाई धेरै असर गर्छन्।
Q:फ्ल्यांजको लागि अर्डर कसरी अगाडि बढ्ने?
A:पहिले हामीलाई तपाईंको आवश्यकता वा अनुप्रयोग हामीलाई बताउनुहोस्। दोस्रो हामी तपाइँको आवश्यकताहरु वा हाम्रो सुझावहरु अनुसार उद्धृत गर्छौं। ग्राहकले औपचारिक अर्डरका लागि नमूना र ठाउँ जम्मा गर्ने पुष्टि गर्दछ। चौथाई हामी उत्पादन व्यवस्था गर्छौं।